စစ်ကိုင်းတွင် သဘာဝဘေး (သို့မဟုတ်) အနီးနားက အကြီးမားဆုံး အန္တရာယ် ငလျင်အကြောင်း ပညာရှင်နှစ်ဦ - Yangon Media Group
စစ်ကိုင်းမြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့မှ ဦးဆောင်ကျင်းပသော သဘာဝဘေး(သို့မဟုတ်)အနီးနားက အကြီးမားဆုံးအန္တရာယ် ငလျင်အကြောင်း သိကောင်းစရာဟောပြောပွဲကို မတ် ၃ ရက်က စစ်ကိုင်းမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
”မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ငလျင်နဲ့ပတ်သက်လာရင် ပြောစမှတ်ပြုစရာနေရာ နှစ်နေရာရှိပါတယ်။ ပဲခူးနဲ့ စစ်ကိုင်းပါ။ စစ်ကိုင်းက စစ်ကိုင်းပြတ်ရွေ့ရှိတဲ့ ငလျင်ကြောကြောင့် လူသိပိုများပါတယ်။ တကယ်တော့ ငလျင်ဆိုတာ ဘယ်တော့လှုပ်မယ်၊ ဘယ်ရက်လှုပ်မယ်၊ ဘယ်အချိန်လှုပ်မယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ တိတိကျကျ မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ မရှိဘူးလားဆိုတော့ ရှိတော့ရှိနေတယ်။ ဒီနေ့လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ နောက်နေ့လဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်။ နောက် ၁ဝ နှစ်မှလား၊ နှစ် ၅ဝ မှလား။ ဒီလိုလဲ ပြောမရပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ မသိတာကို ခန့်မှန်းနေတာထက် ကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့ ငလျင်လှုပ်ရင် ထိခိုက်မှုအနည်း ဆုံးဖြစ်အောင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ၊ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားမလဲ။ ဒါတွေကိုသိအောင် ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လာရောက်ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် အင်ဂျင်နီယာ ဘူမိဗေဒဌာနမှ ပါမောက္ခဌာနမှူး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်က ပြောသည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲတွင် အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်သောင်းနှင့် မြို့မိမြို့ဖအဖွဲ့နာယကကြီး ဆရာဦးဇော်ဝင်းတို့က အဖွင့်အမှာစကားများ ပြောကြားကြပြီး ငလျင်ပညာရှင်များဖြစ်ကြသည့် အင်ဂျင်နီယာဘူမိဗေဒဌာနမှ ပါမောက္ခဌာနမှူး ဒေါက်တာထွန်းနိုင်နှင့် Total Solution Co.,Ltd. မှ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါက်တာစိုးမိုးကျော်တို့ က ငလျင်နှင့်ပတ်သက်သော အသိပညာဗဟုသုတများကို ရှင်းလင်းဟောပြောကြသည်။
မြန်မာ့ဟင်းခတ် အမွှေးအကြိုင် ဈေးကွက်ဖွံ့ဖြိုးရေး UK Aid မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သုံးသန်းကျော် ရင်းနှ??
”သြစတြေးလျနေ့”တွင် လူဖြူ နယ်ချဲ့သမားများကို ဆန္ဒပြ